Belkin anotangisa Wemo iyo yaunogona kudzora yako yekushandisa otomatiki neApple Watch | Ndinobva mac
Kana tikati izvo kana tichiti kubudirira kweApple Watch kuri kutanga chete, hatisi kukanganisa. Apple inoenderera mberi ichishandira pamwe nemakambani echitatu-bato mune zvine chekuita nekuitwa kwekushandisa kweApple Tarisa muzviitiko zvinowedzera zveupenyu hwezuva nezuva. Sezvaungave uchitoziva, Apple iri kuitawo nhanho dzayo dzekutanga maererano neimba yekushandisa neKeKKit, yakazara control protocol kuburikidza iyo uye neiyo iOS chishandiso kana Apple Watch iwe unogona kudzora zvinhu zvakaita sechiedza chemakamuri, kuti uvhure mapofu here kana kuti kwete kubatidza kudziyisa kana iwe uchibvunza Siri.
Vazhinji ndivo vagadziri vezvishongedzo izvo zviri kufunga nezve seti yezviito zveiyo HomeKit protocol kuitira kuti zvigadzirwa zvavo zvishande zvakaringana nemazano anotangwa neApple mavari uye mune iyi kesi yaive nguva yaBelkin neayo nyowani Wemo catwalk.
Tinofanira kuzviziva neshoko iri idzva uye ndezvekuti mazuva ano, kuitira kuti zvimwe zvishongedzo zvakaita semagetsi emagetsi, mathermostats kana mapofu agone kudzidziswa, ivo vanoda "gateway" chishandiso, zvinova ndizvo chaizvo zvinodzora zviwanikwa izvi. Kana iwe uchidzora gedhi neako Apple Watch kana chishandiso cheIOS, iwe uchave unokwanisa kudzora zvishongedzo izvo izvo catwalk inogona kudzora.
Tine muenzaniso unokurumidza munzvimbo dzakasiyana siyana dzekushandisa pamba izvo Ikea iri kutengeswa ine payo nzira yekudzora gedhi. Iwe unodhawunirodha chikumbiro uye unogona kudzora gedhi nefoni yako. Nekudaro, nguva pfupi yadarika vakagadzira iyo gedhi inoenderana neKeKKit, saka iwe unozogona kudzora iwo masuo uye nekudaro izvo zvishongedzo zvakabatana kune iro gedhi neyemuno Apple kunyorera «Kumba».
Belkin ndiye anotevera kuburukira kubhizinesi uye akagadzira Wemo, iyo catwalk iyo iwe yauchakwanisa kudzora yakawanda zvishongedzo. Belkin yazivisa kuti yayo Wemo mutsara we smart smart mhinduro ikozvino HomeKit inoenderana kuburikidza neiyo nyowani Wemo Bridge. Nenzira iyi, vashandisi veWemo vanogona kubvunza Siri pane yavo iPhone, iPad kana Apple Watch: "Siri, batidza Wemo" kana "Siri, kudzima mwenje mumba yekutandarira" kana ivo vanogona kushandisa "Kumba" kunyorera kudzora chero eizvi zvishandiso. Vashandisi vanogona zvakare kusanganisira zvigadzirwa zveWemo mumakamuri nemakamuri ekushanda pamwe neanopfuura zana zvigadzirwa zvinoenderana neKeKit uye nekuzviwana ivo vachienda.
Saka kana iwe uine Apple Watch, sezvo iri chikamu cheApple ecosystem, unogona kudzora zvese kubva mairi nemirairo yakapusa kuna Siri. Mutengo weWemo gedhi i $ 39,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Belkin anotangisa Wemo iyo yaunogona kudzora yako yekushandisa otomatiki neApple Watch